ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် စက္ကူထုပ်များကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူခြင်းအား အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းခွင့်နှင့်ပတ်သက်၍ COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နေရသော ကာလဖြစ်ပါ၍ ယခင်ခေါ်ယူခဲ့သော တင်ဒါဖွင့်မည့်ရက်ကို ခေတ္တဆိုင်းငံ့ခဲ့ပါသည်။
၂။ ယခုအခါ တင်ဒါနောက်ဆုံး ဖွင့်လှစ်မည့် နေ့ရက်နှင့်အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အောက်ပါအတိုင်း သတ်မှတ်ပါသည်-
(က) တင်ဒါ ပုံစံတင်သွင်းရမည့် နောက်ဆုံးရက်၊ (၁၁-၂-၂၀၂၁) (ကြာသပတေးနေ့)
Read more about ပညာရေးဝန်ကြီးဌာန၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာန၊ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
Myanmar’s Participatory Approach to Assessment Policy
In Myanmar, as in other countries, the education system has traditionally placed an emphasis on the rote memorisation of information in teaching, learning and assessment. However, in 2016, the government introduced the National Education Strategic Plan (NESP) which called foramore balanced system of formative and summative assessments that assesses student learning against national learning standards.
Read more about Myanmar’s Participatory Approach to Assessment Policy
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း
၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲတွင် ရရှိသော အမှတ်စာရင်းကို မိမိ၏ ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် မိုဘိုင်းဖုန်းဖြင့် https://mmexamscore.org တွင် ရှာဖွေကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ Software ထည့်သွင်းရန်မလိုဘဲ၊ ဖုန်း/ကွန်ပျူတာ၏ Web Browser ဖြင့်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
Read more about ၂၀၂၀ ပြည့်နှစ်တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့်စာမေးပွဲ အမှတ်စာရင်း
၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စက်ပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ရုံးသုံးစက်ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
Read more about ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ စက်ပစ္စည်းများ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါခေါ်ယူခြင်း
The Official Launch of Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 Results
Wednesday, 23 December 2020 |
Bangkok, Thailand: SEA-PLM Secretariat, co-chaired by United Nations Children’s Fund East Asia and Pacific Regional Office (UNICEF EAPRO) and Southeast Asian Ministers of Education Organization (SEAMEO), officially launched the Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 results during 1 and2December 2020.
Read more about The Official Launch of Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 Results
အရှေ့တောင်အာရှ မူလတန်းအဆင့် သင်ယူတတ်မြောက်မှုစစ်တမ်း (၂၀၁၉) ရလဒ်များထုတ်ပြန်မှုအခမ်းအနား ကျင်းပ
ကုလသမဂ္ဂကလေးများရန်ပုံငွေအဖွဲ့ (UNICEF) နှင့် အရှေ့တောင်အာရှ ပညာရေးဝန်ကြီးများ အဖွဲ့အစည်း (SEAMEO) တို့ ပူးပေါင်းကျင်းပသော အရှေ့တောင်အာရှ မူလတန်းအဆင့် သင်ယူတတ်မြောက်မှုစစ်တမ်း (၂၀၁၉) ရလဒ်များ Southeast Asia Primary Learning Metrics (SEA-PLM) 2019 Results ထုတ်ပြန်ခြင်းအခမ်းအနားကို ယနေ့နံနက် ၈ နာရီခွဲတွင် အွန်လိုင်း စနစ်ဖြင့်ကျင်းပရာ ကမ္ဘောဒီးယား၊ လာအို၊ မလေးရှား၊ မြန်မာ၊ ဖိလစ်ပိုင်နှင့် ဗီယက်နမ်နိုင်ငံတို့မှ ပညာရေးဝန်ကြီးများက မိန့်ခွန်းပြောကြားခဲ့ကြသည်။
Read more about အရှေ့တောင်အာရှ မူလတန်းအဆင့် သင်ယူတတ်မြောက်မှုစစ်တမ်း (၂၀၁၉) ရလဒ်များထုတ်ပြန်မှုအခမ်းအနား ကျင်းပ
ဆရာများအတွက် NAG အထောက်အကူပြု သင်ကြားမှုပုံစံ
ဆရာများအတွက် အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG) အထောက်အကူပြု သင်ကြားမှုပုံစံကို အောက်ပါ Download Links များတွင် ရယူနိုင်ပါသည်-
Read more about ဆရာများအတွက် NAG အထောက်အကူပြု သင်ကြားမှုပုံစံ
၁။ ၂၀၂၀-၂၀၂၁ ခုနှစ် ဘဏ္ဍာရေးနှစ်၊ မြန်မာနိုင်ငံစာစစ်ဦးစီးဌာနတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် အောက်ဖော်ပြပါ ပစ္စည်းများကို မြန်မာကျပ်ငွေဖြင့် ဝယ်ယူလိုပါ၍ အိတ်ဖွင့်တင်ဒါ တင်သွင်းနိုင်ရန် ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်-
(က) 27"x34" (70 gsm) ရွက်ရေ (၅၀၀)ပါ (နိုင်ငံခြားစက္ကူဖြူ)၊ (၁၆၀၀၀)ထုပ်
အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG)
အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG) ကို အောက်ပါ Download Links များတွင် ရယူနိုင်ပါသည်-
Read more about အခြေခံပညာအဆင့် အမျိုးသားပညာရည် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်ခြင်း လမ်းညွှန် (National Assessment Guidelines for Basic Education-NAG)
၂၀၂၀ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ ကြည့်ရှုရန်
၂၀၂၀ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများကို အောက်ဖော်ပြပါ အတိုင်း ဆက်လက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်-
Read more about ၂၀၂၀ - ခုနှစ် ၊ တက္ကသိုလ်ဝင်ခွင့် စာမေးပွဲအောင်စာရင်းများ ကြည့်ရှုရန်